I-Raw AC 262356 powder (870888-46-3) hplc =98% | AASraw abaphakeli
/ iimveliso / SARMS / AC 262356 powder
SKU: 870888-46-3. Udidi: SARMS
I-AASraw inokusetyenziswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya komlinganiselo we-AC 262356 powder (i-870888-46-3), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-Raw AC-262356 powder ezisemqoka
I-Raw AC-262356 powder ekusebenziseni umzimba
I-AC-262356 powder Ukusetyenziswa
I-AC-262356 powder enye yeyona i-SARM enamandla kwipayipi, kwi-2 / 3rds kuphela ye-anabolic pottery ye-testosterone ... kodwa ayinqabile, kwaye ngenxa yoko (ukubuthathaka + okungaqhelekanga) isenokungabonakali. Izinto ezifana nalezi zihamba phantsi kwe-radar lonke ixesha. Ngaphezulu, andizange ndibone umntu ovavanya ngayo, okanye afunde nawaphi na amanqaku ezesayensi achaza ukuphuhliswa kwegazi okanye umchamo. Ndiqinisekile ukuba le SARM ayisabonakali. Yaye masibe nethembekile, ngelixa u-bodybuilder oqeqeshiweyo engafuneki into ebuthakathaka kune-testosterone, nawuphi na umdlali osemthethweni (ohlolwe ngamachiza) uza kufumana umda ophezulu kule ndawo.
I-AC-262536 yinkomfa eyenza njengendlela yokukhetha i-androgen receptor modulator. I-Chemically ine-endo-exo isomerism, kunye nefom ifom ibe yifom esebenzayo.
Ngenxa yokunciphisa kunye namatyala e-testosterone zokwelapha, ama-modulator angenayo i-non-steroidal-selective and receptor-receptor angayenza ukuba kubekho unyango olusisigxina ekliniki. Ukusebenzisa isilingo esekelwe kwi-cell AC-262536 yachongwa njenge-AR ligand enamandla kwaye ikhethiweyo, kunye nomsebenzi we-agonist okhethekileyo ohambelana ne-androgen testosterone. I-2-iveki eqhubekayo kwizigulane zamadoda ezixutywayo yabonisa ukuba i-AC-262536 iphucula kakhulu imilinganiselo ye-anabolic kulezi zi lwanyana, ngokukodwa ekukhuthazeni ukukhula kwe-levator ani kunye nokunciphisa amazinga e-LH aphakamileyo. Ngokuphambene kakhulu ne-testosterone, STEALTH (AC-262536) ineempembelelo ezinobuthakathaka kunye ne -rogenic, njengoko zilinganiswe ngeprotate kunye nezisindo ze-vesicle weight. Ngaloo ndlela, i-AC-262536 imela iklasi yenomathotho ye-androgen receptor (i-SARMs) kunye neempembelelo ze-anabolic.
I-AC-262356 powder enye yeyona i-SARM enamandla kwi-spectrum, kwi-2 / 3 nje ye-anabolic pottery ye-testosterone ... kodwa ayinqabile, kwaye ngenxa yoko (ngokubuthathaka + engabonakaliyo) ayisabonakali. Asizange sibone nawuphi na umntu ovavanyayo, okanye afunde nantoni na isayense echaza ukuphuhliswa kwegazi okanye umchamo. Sithemba ngokuqinisekileyo ukuba le SARM ayisabonakali. Yaye masibe nethembekile, ngelixa u-bodybuilder oqeqeshiweyo engafuni into ebuthakathaka kune-testosterone, nawuphi na umdlali ofanelekileyo (onokuhlolwa kweziyobisi) uza kufumana umda ophezulu kwi-AC-262356 powder
Nangona i-AC-262536 ithathwa njengobumnene ngakumbi kuneSARM ezininzi ezidumileyo, amandla alo okwenene ekhona kwinto yokuba isenza umsebenzi osondeleyo kunye ne-androgenic. Oku kuthetha ukuba kubangele iingozi ezimalunga nakwabesifazana abafuna ukufumana umda ophakamileyo ngokukhula kwemisipha kunye namandla, kodwa abafuni umngcipheko wokuhlakulela iimpawu zesintu ezingenakulungeleka njengokukhawuleza, ukukhula kweenwele ezingafunekiyo, ukunyaniseka kwezwi njl njl.
Ukungathandabuzeki kolwazi lwethu (lunokusetyenziswa ngabadlali abaphambili)
Imiphumo engabonakaliyo yenzalo
10 kwi-30 milligrams ngosuku.
Isilumkiso kwi-Raw AC-262356 powder
Okwangoku, okwangoku, akukho zifundo zonyango ezifanelekileyo ezenziwe kwimiphumo ye-AC-262,536 kubantu. Kukwajongwa njengemichiza yophando kwimida yonyango.
Mhlawumbi inqaku elihle kakhulu le-AC-262536 likwazi ukukhulisa ukukhula komzimba. Uphando lubonisa ukuba iigundane ezifakwe ngelolu hlobo lwe-SAR zifumana ukukhula okukhulu kwemisipha ye-66% xa kuthelekiswa nokufakwa kwe testosterone.
Ezinye iintlawulo ze-AC-262,536 ziquka:
ekuncedeni ukuphucula umsebenzi we-hippocampus (oya kugcina ukuqala kwesifo se-Alzheimer)
kunye nokukhuselwa komhlaza wesibeletho. Ukuvavanya kwedatha kubonisa ukuba le SARM inokuyithintela umsebenzi we-dihydroxytestosterone (DHT) kwi-cell prostate cell cell.
Iingcali zenzululwazi nazo zafumanisa ukuba iziphumo ze-AC-262,536 ekugcineni ubungakanani obuphezulu be-prostate babuyi-14x buthathaka kuneleyo ye-testosterone.
Ngoku ngelixa i-AC-262536 isacingwa nje njengokhemikhali yophando, sele sele ikhona abantu abayisebenzisela ukusebenza kunye neenjongo zokuphucula amandla.
I-AC-262536 ifakwe kwi-66% yeenzuzo ze-anabolic ze-Testosterone, ngoxa zodwa ziqhuba kuphela i-27% kakhulu umsebenzi weAndrogenic.
Kule nto sinokugqiba ukuba i-AC-262536 ine-anabolic: ukulinganiswa kwe-androgenic / i-2.45: 1
Kule rekhodi, ayikho i-SARM eziye zaphuhliswa zikhethe ngokupheleleyo iziphumo ze-anabolic kwi-muscle nangethambo ngaphandle kokuvelisa iziphumo ze-androgenic kwiimfucu.
Into ephawulekayo kukuba yi-prostate gland, esinokuyisebenzisa njengendlela yokulinganisa ukuhlola indlela i-androgenic ye-SARM isekelwe ngayo kwi-effect yayo kwi-prostate gland ngezinga elithile.
Kukho ii-SARM eziliqela ezine-anabolic: izilinganiso ze-androgenic ze-3: i-1 kwaye iphakanyisiwe nangona kunjalo, kwaye loo nto ifanelekile.
Umlinganiselo ophezulu phakathi kwee-SARM eziqhelekileyo esiziwayo njengangoku i-RAD-140 ene-anabolic: umlinganiselo we-androgenic we-90: 1.
Oku akuthethi ukuba i-RAD-140 iya kuphazamisa kakhulu i-AC-262536 kuyo yonke imimandla, kodwa iyakucacisa into esinokuyilindela njengoko sikwandisa umlinganiselo we-AC-262536 kuphando lwethu (phezulu kwe dose, ngaphezulu kunye neempembelelo ze-androgenic esinokuzilindela ukuqala ukuxhuma, ngokuchasene ne-RAD-140 apho unokulindela khona imisebenzi engaphezulu ye-anabolic ngaphezu komsebenzi we-androgenic rhoqo xa i-dosage ikhula).
Ingongoma leyo, ngokuqhubekayo ungakwazi ukuphuma kwimiphumo ye-androgenic nge-ratio ehle kakhulu (kunye nezinye izinto), ngakumbi i-SARM iya kuba yinkqubo yangempela yekliniki (umz: ukuphathwa kwabasetyhini nge-Osteoporosis kunye nezinye izihlunu kunye namathambo ukuchithwa kwemiqathango).
I-hormone esisezantsi esicatsanisa i-ratios kuya kwi-Testosterone, ene-ratio ye-1: 1.
I-AC-262356 powder I-powder Raw
I-AC-262356 yePowder Marketing
Indlela yokuthenga i-AC-262356 powder esuka kwi-AASraw
I-AC-262356 powder Iidraphu zokuPhepha eziMdaka: